Topeka, KS • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny filanao fanorana Nuru mifaly sy fanosotra vatana any Topeka, KS.
Topeka dia renivohitra ao amin'ny fanjakan'ny Etazonia any Kansas ary ny toeran'ny Shawnee County. Eo amoron'ny renirano Kansas any amin'ny faritra afovoan'i Shawnee County, any avaratra atsinanan'i Kansas, any Etazonia Afovoany. Tamin'ny fanisana tamin'ny 2010 dia 127,473 XNUMX ny isan'ny tanàna. Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny finaritra mahafinaritra Nuru fanorana filàna ary fikosoham-bolo ao Topeka, KS.